अफगानिस्तानमा चीनको चासो
चीनले पाकिस्तानसितको अर्बौं डलरवाला इकोनोमिक करिडोर (सिपिइसी) लाई अफगानिस्तानसम्म बढाउन आफूले चाहेको बताएको छ । चीनको भनाइ छ कि यसबाट यस क्षेत्रमा शान्ति बहाल गर्न सहयोग पुग्नेछ । तीन देशबीच बेइजिङमा सम्पन्न बैठकपछि चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले भनेका छन् कि इकोनोमिक करिडोरबाट समृद्धिको गति तीव्र हुन सक्छ ।
यी तीन देशबीचको संवादलाई चीनको त्यस कोसिसको हिस्सा मानिँदै छ, जसमा ऊ पाकिस्तान र अफगानिस्तानबीचको दुस्मनी कम गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । अफगानिस्तानले भन्दै आएको छ कि पाकिस्तान तालिवानलाई प्रोत्साहन दिइरहेको छ । चीनले पाकिस्तानसित इकोनोमिक करिडोरमा करिब ५७ अर्ब डलर लगानी गरेको छ । यस प्रोजेक्टअन्तर्गत चीन सडक, रेलवे लाइन र पाइपलाइनको सञ्जाल फैलाइरहेको छ । यी काम पाकिस्तान बन्दरगाह ग्वादर र पश्चिमी चिनियाँ सहर क्यासगरबीच भइरहेका छन् ।
अफगानिस्तान, चीन र पाकिस्तानबीच यस प्रकारको पहिलो बैठक भएको छ । चीन दुवै देशबीच मध्यस्थता गरेर तनाव कम गराउन चाहन्छ । चीन सिपिइसीलाई अफगानिस्तानसम्म विस्तार गर्न सफल भयो भने यसको असर भारत–अफगानिस्तानबीचको सम्बन्ध तथा चाबहार बन्दरगाहमा केकस्तो असर पर्ला ? के यी तीन देशको बैठकबाट भारत सतर्क हुनुपर्छ ? के अफगानिस्तानमा पनि भारतको प्रभावमा चीन नै माथि पर्ला त ?
यस विषयमा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयमा दक्षिण एसिया अध्ययन केन्द्रका प्राध्यापक सविता सी पाण्डेको विचार यस्तो छ– पाकिस्तान र चीनको मित्रतामा अफगानिस्तान सामेल हुनु निकै जटिल समस्या हो । चीनको अफगानिस्तानमा आफ्नो आर्थिक हित छ । अफगानिस्तानमा चीनको तामाको उत्खनन गर्ने प्रोजेक्ट प्राप्त भएको थियो । तर, अशान्तिका कारण यो अघि बढ्न सकेन । यद्यपि, यो प्रोजेक्ट अझै चीनकै कब्जामा छ ।
यसका अतिरिक्त चीन र अफगानिस्तानको सम्बन्ध कहिल्यै खराब भएको छैन । तर, पाकिस्तान र अफगानिस्तानको सम्बन्ध भने निकै खराब छ । त्यसैले, चीन उनीहरू दुवैबीचको सम्बन्ध सुधार होस् र आफूले त्यहाँ काम गर्न सहज होस् भन्ने प्रयास गरिरहेको छ ।
अमेरिकाले आफ्नो सैनिकलाई पूर्णतः फिर्ता बोलायो भने अफगानिस्तानमा चीन सबैभन्दा ठूलो चुनौती बन्न सक्छ भन्ने भारतको आशंका छ । त्यस्तो अवस्थामा अफगानिस्तानमा पाकिस्तान होइन, चीन ठूलो चुनौती बन्नेछ भन्ने भारतलाई राम्ररी थाहा छ ।
भारतको कठिनाइ बढी
यथार्थमा सिपिइसीलाई लिएर अहिले पाकिस्तान र चीनबीचमै विषय अल्झेको छ । सिपिइसीलाई लिएर भारतको आपत्ति त छ नै, तर पाकिस्तानमा पनि यसका कैयौँ समस्या छन् । अफगानिस्तानमा आफ्नो दबदबा कायम राख्नका लागि पाकिस्तानको उपयोग गर्न सकियोस् भन्ने चीनको प्रयास रहेको छ । सिपिइसीलाई लिएर पाकिस्तानमै यति धेरै समस्या छन् कि अफगानिस्तानसम्म पुग्न उसका लागि त्यति सहज छैन । चीनले पाकिस्तानमै रुट बदल्नुपरेको छ । जहाँसम्म भारत र इरानको चाबहार बन्दरगाहको विषय छ, यसमाथि कुनै प्रत्यक्ष असर पर्नेछैन । हामीले पाकिस्तानलाई बाइपास गर्नैका लागि चाबहार उपयोग गरिरहेका छौँ ।
सिपिइसीसित भन्दा ग्वादर बन्दरगाहले भारतको चाबहारलाई प्रभावित गर्नेछ । यसमा कुनै शंका छैन कि अफगानिस्तान र चीन नजिक आए भने भारतसितको सम्बन्धमा धक्का त पक्कै लाग्नेछ । जुन ग्वादर बन्दरगाहलाई चीनले विकसित गरिरहेको छ, त्यसमा पनि यति धेरै समस्या छन् कि लगातार ढिलाइ भइरहेको छ । पाकिस्तानभित्रै बलुचले यसको विरोध गरिरहेका छन् । अमेरिकाले आफ्नो सैनिकलाई पूर्णतः फिर्ता बोलायो भने अफगानिस्तानमा चीन सबैभन्दा ठूलो चुनौती बन्न सक्छ भन्ने भारतको आशंका छ । त्यस्तो अवस्थामा अफगानिस्तानमा पाकिस्तान होइन, चीन ठूलो चुनौती बन्नेछ भन्ने भारतलाई राम्ररी थाहा छ ।
भारतका कुनै पनि छिमेकीलाई हेर्ने हो भने उनीहरूले चीन कार्ड उपयोग गरिरहेका छन् । यस्तो नेपाल, श्रीलंका, बंगलादेश र यहाँसम्म कि माल्दिभ्सले पनि गरिरहेको छ । अब डर छ कि कतै अफगानिस्तान पनि चीन कार्डको उपयोग गर्न नलागोस् । भारतका यी छिमेकीले चीनलाई कुनै पनि रूपमा टाढा गरेका छैनन् ।
अस्तित्व संकटमा भियतनामी हिन्दू
लोकतन्त्र र भूकम्पको सन्दर्भ
पार्टी एकताको रसायन